(ခ)-ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး Website မှ လွှင့်တင်ထားရာတွင် မည်သည့် Font အသုံးပြုထားပါသနည်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် အသုံးများသော Zaw Gyi Font ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၁၄. ၁၁. ၂၁၀၈)
မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် (Myanmar Law Information System)ကို ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး Website မှလွှင့်တင်ထားသည်တွင် မည်သည့် Font အသုံးပြုထားပါသနည်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်း တွင် အသုံးများသော Zaw Gyi Font ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းကို ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှဆောင်ရွက်ပါသလား၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပါသလားတို့ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဥပဒေကို လူတိုင်းသိရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ရှေ့နေများ၊ တရားသူကြီးများ၊ ဥပဒေ ကျောင်းသားများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ ဥပဒေပြုသူများအတွက် အထူးလိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေများသည် များပြားစွာရှိသည့်အတွက် အလွတ်မရနိုင်ပါကြောင်း၊ ထိုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို ရှာဖွေအကိုးအကားပြုရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အလုံးစုံသော ဥပဒေအလုံးများသည်လည်း လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်တည်း၊ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုတည်းတွင် မရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဥပဒေများ မြောက်များရှိသည့် အနက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုဥပဒေ၊ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဥပဒေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်၊ စီရင်ထုံး၊ Constitutional Law ၊ State Law ၊ Regional Law ၊ Customary Law စသည်များကို ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်၊ ကဏ္ဍအလိုက်၊ ခေတ်အလိုက်၊ ဥပဒေအမည်အလိုက် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး MlIS Website တွင် တင်ပြပေးထားသည်ကို တွေ့ရှိပါ ကြောင်း၊ ဥပဒေများသာမက တစ်ဆင့်ခံဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်စသည်များကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနှင့် ရှာဖွေနိုင်သကဲ့သို့ ဥပဒေ၊ သမိုင်းနောက်ခံ အကြောင်းအရာများကိုပါ လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း၊
၁၇-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာ့သတင်းစာတွင် မြန်မာ-ကိုရီးယားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် မြန်မာဥပဒေသ တင်းအချက်အလက် စနစ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် နုနုရင် (ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး) မှ လည်းကောင်း၊ ၁-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဆောင်းပါးရှင် လွင်သစ္စာ (ဥပဒေ) ကလည်း ပြည်သူအတွက် မြန်မာဥပဒေသတင်း အချက်အလက်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ တန်ဖိုးကြီးလှသည့် ဥပဒေစာအုပ်ကြီးများကို Smart Phone ဖြင့် အခမဲ့သုံးစွဲခွင့် ပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အဆိုပါစနစ်ကို အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ပထမဆုံး အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါ ကြောင်း၊ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် Zaw Gyi One Font ၊ Myanmar3 Font များဖြင့် သုံးစွဲရလွယ်ကူစေရန် ပြုလုပ်ပေးထားသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အထူးကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း၊
ဥပဒေသည် လုံးဝမပြောင်းလဲဘဲ ထားရှိ၍မရကြောင်း၊ ခေတ်၊ စနစ်၊ မူဝါဒ၊ ပြည်သူပြည်သားများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပယ်ဖျက် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြောင်းလဲမှုကိုလည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြင်ဆင် Update လုပ်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များက ဥပဒေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ပယ်ဖျက် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းမှုများကို မည်သည့်ဌာနက ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းနှင့် ယခုဥပဒေစနစ်ကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးခံရမှု မရှိစေရန် Cyber လုံခြုံရေး၊ Network Security ပိုင်းကိုလည်း မည်သို့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးဝင်းမြင့်
နိုင်ငံတော်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးနှင့် ဥပဒေအချက်အလက်များကို ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်ရေးတို့ကို ရည်ရွှယ်ပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးအနေဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၏အကူအညီနှင့် မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက် စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဥပဒေများကို ပြည်သူများအနေဖြင့် Internet Website နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများမှ အလွယ်တကူရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက် အလက်စနစ်တွင် Myanmar Code Volume-1 မှ 13 ထိပါသည့် ဥပဒေများကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပဒေများ၊ ယင်းဥပဒေများက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများမှလည်းကောင်း အတတ်နိုင်ဆုံး ပြည့်စုံအောင် ရှာဖွေစုဆောင်း တင်ပြထားသည့်အပြင် ဥပဒေသမိုင်းကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန် ရုပ်သိမ်းပြီး ဥပဒေများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါကြောင်း၊
ဥပဒေတစ်ခုချင်းအလိုက် ရှာဖွေရာတွင် မူလပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ပြင်ဆင်ချက်၊ ပြင်ဆင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်၊ ပြင်ဆင်သည့်ခုနှစ်၊ အကြောင်းအရာစသည့် အချက်အလက်များကို လွယ်လင့်တကူကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက် ထားပါကြောင်း၊ မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် ပထမစာမျက်နှာ (Home Page) တွင် ခေါင်းစဉ်ကြီး ၁၀ ခုဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြထားပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုဥပဒေများ၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ဆင်‌့ခံ ဥပဒေများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ဆင့်ခံ ဥပဒေများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဒေသဥပဒေများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များ၊ စီရင်ထုံးများ၊ ဇယား သို့မဟုတ် ပုံစံများဖြင့် အခြားဟူ၍ ခေါင်းစဉ်ကြီး ၁၀ ခုခွဲခြား တင်ပြထားပါကြောင်း၊ ခေါင်းစဉ်များအလိုက် မိမိရှာဖွေလိုသည့် အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်ကို ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်၊ ကဏ္ဍအလိုက်၊ ခေတ်အလိုက် ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်သဖြင့် မိမိရှာဖွေလိုသည့် ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ ကြော်ငြာစာစသည့် တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများကို အလွယ်တကူရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယခုလွှင့်တင်ထားသည့် မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်သည် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းတွင် ရုံးသုံးအနေဖြင့် အသုံးပြုလျက်ရှိသော Myanmar3 Font ဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် မိမိတို့ နိုင်ငံတွင် လက်ကိုင်မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Zaw Gyi Font ကို အသုံးများခြင်းကြောင့် ဥပဒေ အချက်အလက်များရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲရှိကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် ကိုရီးယား IT ပညာရှင်များဖြင့် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာသတင်းအချက်အလက် များကို Myanmar3 Font အပြင် Zaw Gyi Font ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက် လည်ပတ်မှုရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်နှင့် အချက်အလက်အသုံးပြုမှု များပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရဥပဒေပြု ဝန်ကြီးဌာနတို့ကြား မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သဘောတူစာချုပ်ကိုလည်း အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များနှင့်တကွ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက်ရန် ဖြည့်စွက်သည့်နေရာများတွင်လည်း Myanmar MlIS Website တွင် ရှေ့နေချုပ်ရုံးကဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊
တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များအားလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း တောင်းခံထားပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနက ပေးပို့လာသည့်အခါ အချက်အလက်များ၊ ပြန်တမ်းတွင် ရှာဖွေရရှိသည့်အချက်အလက်များကို ပူးပေါင်းစိစစ်ပြီး ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အသစ်ထပ်မံ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများကိုလည်း MlIS Website တွင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းများကို ဝန်ထမ်းများထားရှိနိုင်ရန် ရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဖွဲ့စည်းပုံ သေချာမရှိသော်လည်း ရှေ့နေချုပ်ရုံးတွင်ရှိသည့် ဦးစီးဌာနများ၏ လက်ရှိအင်အားမှ ထုတ်နုတ်ပြီး သင့်တော်သည့် အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး Data Input အဖွဲ့ဟူ၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးအနေဖြင့် မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီတင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။